Home » သတင်း » အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ BeckTV
အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာ BeckTV
BeckTV, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကွန်ယက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားဘူတာအပါအဝင်တပ်ဆင်ခနီးပါးတိုင်းအမျိုးအစား, အဘို့ cable ကိုဆန်းသစ်သောနည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး ဂြိုဟ်တု အဆောက်အဦးများ, ကွန်ယက်ကိုစစ်ဆင်ရေးစင်တာများ, အားကစားနှင့်မိုဘိုင်းကုန်တင်ကား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များနှင့်တက္ကသိုလ်အားကစားကွင်းနေရာများနှင့်ဝတ်ပြုမှုအိမ်များ။ ဒီမတူနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ BeckTV အင်ဂျင်နီယာများ 2019 တစ်လျှောက်လုံးတွင်လက်ဖြစ်လိမ့်မည် NAB ပြရန် system ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။
၎င်း၏တဲ SL5605 ခုနှစ်, BeckTV င်း၏ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အားလုံးဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုန်ဆောင်မှုများအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်နှင့်အတူ clients များပေးနိုင်စွမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, နီးပါးမည်သည့်ဘတ်ဂျက်များအတွက်ပါလိမ့်မယ်။ BeckTV အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက် client ကို-based ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်ပြီးပြည့်စုံသောအာကာသစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဒီဇိုင်း, အင်ဂျင်နီယာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်နှင့်ကျယ်ပြန့် In-အိမ်သူအိမ်သားသတ္တု leverages, ပေါင်းစပ်, ထင်းလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများစွမ်းရည်။
အဆိုပါ BeckTV တဲမှဧည့်သည်များမှာလည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်အသုံးစရိတ်သာရှိပြီးပြည်ပမှအရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်အပါအဝင်ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတည်ဆောက်ဘို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား, အမျိုးမျိုးဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းရကြလိမ့်မည် cloud-based Workflows; မှာ-အိမ်မှာဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု; ဒါကြောင့်စက်ရုံနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် Greenfield စီမံကိန်းများကိုမှကြွလာသောအခါနှင့်ချဉ်းကပ်မှုထုတ်လွှင့်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ ပို. ယူနိုင်ပါတယ်။
BeckTV ရဲ့ Brendan Cline နည်းပညာဆိုင်ရာစက္ကူတင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့
Brendan Cline, BeckTV မှာအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူး, အ 2019 စဉ်အတွင်းမိမိအနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက္ကူတင်ဆက်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သ NAB ပြရန်။ အဆိုပါစက္ကူ, အမည်ရ "သင်၏လုပ်ငန်းများအတွက်ညာထုတ်လွှင့် Facility တည်ဆောက်ခြင်း," အိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းချက်နေဆဲလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲကြသောအခါတစ်ကြိမ်ညာဘက်အခြေခံအဆောက်အအုံရွေးချယ်ရာတွင်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မျိုးစပ်ထုတ်လွှင့် / အိုင်တီအင်ဂျင်နီယာအခွက်တဆယ်ကိုရှာဖွေရန်ခဲယဉ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်ကိုလည်းအတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်အရေးပါဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုများဆနျးစစျလိမျ့မညျ SMPTE ST 2110 IP ကိုဗဟိုပြုအသံအပေါ်နှင့်အရွယ်မှာဖိုင်ဘာအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ဗဟိုပစ္စည်းကိရိယာများအခန်းထဲမှာဒီဇိုင်းအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်။ အခန်းထဲမှာ N6-တစ်ဦးအတွက်9နံနက်: Cline ရဲ့တင်ဆက်မှု 10-20 ကနေဧပြီလ 260 များအတွက်စီစဉ်ထားသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/BeckTV/BeckTV_Brendan-Cline.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Brendan Cline, BeckTV မှာအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူး
"BeckTV ထုတ်လွှင့်စက်ရုံဒီဇိုင်း၏ဦးဆောင်အစွန်းမှာဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့ကိုအခြားစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထက်ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားအဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများမဆိုထုတ်လွှင့်စက်ရုံအဘို့အညာဘက်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်နည်းပညာကိုရွေးချယ်ခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန် NAB တစ်လျှောက်လုံးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် - ဒီနေ့ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း 4K, HDR အပါအဝင်, ငါတို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားအကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ကြောင်းအိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းချက် - အများဆုံးစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန် ထိရောက်မှုနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားဘဏ်ဍာ။ "
- Fred သည် Beck, သမ္မတ, BeckTV
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/BeckTV/BeckTV_FredBeck.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Fred သည် Beck, BeckTV သမ္မတ
BeckTV အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် '' ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းနှင့်အတူ, BeckTV အခြားမည်သည့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထက်ပိုဖောက်သည်များအတွက်ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားအဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အိမ်များဖို့နီးပါးတိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကွန်ရက်များကနေလျှောက်လွှာဒေသခံတီဗီဘူတာ, အားကစားကုန်တင်ကားများနှင့်အားကစားကွင်းနေရာများမှာတော့ BeckTV အချိန်ပေါ်နှင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်အောင်မြင်သောရလဒ်များ, အာမခံဖို့ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ, Denver, New York မှာ Austin Full-ဝန်ဆောင်မှုရုံးများထိန်းသိမ်းထားအဖြစ် BeckTV အကြောင်းကိုဝါရှင်တန်ဒီစီအတွက်အင်ဂျင်နီယာရုံးနောက်ထပ်အချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.becktv.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/BeckTV/190208BeckTV.docx
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]_TV%20is%20heading%20to%20the%202019%[အီးမေးလျ protected]%21%20Booth%20SL5605.%20Stop%20by%20and%20discuss%20the%20biggest%20challenges%20of%20selecting%20infrastructure%20and%20tech%20for%20your%20facility.%20%234K%20%23HDR%20%23NAB%20%23systemsintegrator%20%23broadcast%20%23technology%20-%20http://bit.ly/2Dlcig3
6024 ဗဟိုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း Drive ကို
Pflugerville, တက္ကဆပ် 78660
Denver, နယူးယောက်, နှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့အပိုဆောင်းရုံးများ
Facebook က: www.facebook.com/BeckTV-424896514283705/
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/becktv/
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB ပြရန် BeckTV ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း သင်၏လုပ်ငန်းများအတွက်ညာထုတ်လွှင့် Facility တည်ဆောက်ခြင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB16 nabshow နည်းပညာဆိုင်ရာစက္ကူ	2019-02-08
ယခင်: အခုတော့ရရှိနိုင် Aja HA5-12G Mini ကို-converter
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ - အငယ်တန်းအဆင့်